वजन तपाईं कति कदम एक दिन आवश्यक छ?
तपाईं वजन एक दिन के गर्न आवश्यक कति कदम जान्नु आवश्यक पहिलो कुरा - यो तपाईं आफ्नो घर अन्तिम रेल लागि लेट छन् भने कदम, खुशी र यस्तो हुनुपर्छ के छ।
वजन को संयन्त्र सुरु गर्न7मी / घन्टा औसत गति आवश्यक छ। यो दर, तपाईं कम्तिमा आधा एक घण्टा हिँड्नुपर्छ। कारण हो पैदल सुधार वा पातलो पूर्ण व्यायाम हुनेछ। मात्र यस्तो अवस्थामा जो जिम र विशेष अभ्यास बिना गत महिना मा तपाईं अतिरिक्त वजन5किलो सम्म गुमाउन सक्छ पैदल को स्पष्ट लाभ हुनेछ। नियमित अभ्यास गर्दा, एक स्वस्थ र सुन्दर शरीर प्राप्त गर्न छ महिना पछि हिड्ने लागि एक मौका छ।
त्यसैले तपाईं कति कदम मा दिन के गर्न आवश्यक? अधिक, राम्रो। सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, मांसपेशिहरु सक्रिय काम गर्न, सुरु मुटुको दर त्वरित र पसिना धारा घनघोर थियो।
औसत पैदल गति कसरी मापन गर्ने?
पहिले नै माथि उल्लेख रूपमा, एक गति हुनेछ केवल7मी / घन्टा मा हिड्ने को प्रयोग। तर प्रत्येक व्यक्ति फरक चरण चौडाइ। त्यसैले कसरी मापन गर्न , मानव गति तपाईं एक दिन हिँड्नुपर्छ कति पक्का लागि थाहा?
भन्ने तथ्यलाई औसत गति सम्पूर्ण जीव को काम को सक्रिय, एक ठाउँमा तपाईं जान सक्नुहुन्छ खडा पछि पनि, माइल मा, तर प्रति मिनेट चरणमा मापन छैन। त्यसैले, तपाईं पहिलो कदम को आफ्नो नम्बर एक मिनेट मा पूरा भएको छ निर्धारण गर्न आवश्यक छ।
यो भन्दा ढिलो हिड्ने - 80, औसत - - 110, छिटो - 130, धेरै छिटो - 140 भन्दा बढी यो प्रति मिनेट 60 कदम, ढिलो छ।
स्वास्थ्य र सिद्ध आंकडा - यो 10 000 कदम हो
पहिले नै माथि वर्णन रूपमा, वजन हानि लागि आवश्यक दूरी कदम को संख्या गणना गर्न आवश्यक छ।
10 000 कदम - स्वास्थ्य को ब्रिटिश विभाग तपाईं दिनमा जान आवश्यक कति टाढा बारेमा आधिकारिक बयान अगाडि राख्नु भएको छ, यो न थप न त कम छ। वास्तवमा, केही यसको बारेमा जटिल। एक व्यक्ति बारे 3,000 मी मार्फत जान्छ हरेक दिन - काम, किनमेल, घर वरिपरि हिंड्न। अरूलाई मात्र प्राथमिकताको एक त्वरित गति मा, पुग्न पर्दैन। एक दैनिक कोटा संकलन गर्न 20-30 मिनेट लागि पर्याप्त।
कसरी उपयोगी पैदल
पैदल सम्पूर्ण जीव लागि धेरै उपयोगी छ। पनि मानव शरीर हिड्ने को एक औसत गति मा धेरै फरक काम गर्न थाल्छ। उदाहरणका लागि, नियमित पैदल सबै अधिकारीहरु यो द्वारा राख्नु स्थिति लिइरहेका छन् त कि, मेरुदण्ड aligns।
सबै मानव अङ्गहरू, एक brisk पैदल मा अक्सिजन संग संतृप्त छन् बिष र toxins बहिष्कार। नियमित अभ्यास गर्दा, पैदल रक्त नली र हृदयले समस्या जोखिम कम गर्छ। पैदल रक्तचाप र कोलेस्ट्रल प्रदर्शित normalizes। र, को पाठ्यक्रम, शरीर फिट र स्लिम बन्नेछ।
कति कदम जस्तै तपाईं दिनमा के गर्न आवश्यक
पहिले तपाईं पर्याप्त उनको स्वास्थ्य स्थिति आकलन गर्न आवश्यक छ। यो आधारमा हामी तपाईँलाई दिनमा के गर्न आवश्यक कति कदम को प्रश्न गर्न थप विशिष्ट जवाफ प्रदान गर्न सक्छन्।
परिणाम धेरै सुरुमा बाहिर बाल्न बढी सम्भावना हुनेछ Chase भने एकैचोटि, बिस्तारै सुरु गर्न राम्रो। साथै, पहिलो राम्रो सानो तर छिटो भन्दा लामो जाने हो। त्यसैले तपाईं अधिक लचीला र प्रति मिनेट अप गर्न 120 कदम को आफ्नो गति बढाउन अभ्यास को एक महिना गति सक्षम हुन्छन्।
यसलाई पूर्ण पेट मा जाने छैन, तर खानाको पछि लगभग दुई घण्टा पछि राम्रो छ। ढाड सीधा, काँध अलग हुनुपर्छ। ठीक सास पनि आवश्यक: आफ्नो नाक मार्फत सास फेर्न र मुख मार्फत Exhale। पैदल गर्दा कुरा आवश्यक छैन, वा को सास देखिन्छ साँस र shortness ढक्ढकाउँछु।
स्पट मा हिड्ने
माथि उल्लेख, यो गति महत्वपूर्ण र कदम संख्या छ। केही कारणले कुनै इच्छा वा सडक मा पैदल मा जाने क्षमता छ भने, तपाईं स्थान मा हिड्ने जानुहुन्छ।
त्यसैले, कति कदम एक दिन मा-साइट गर्नै पर्छ? करिब आधा, तपाईं सडक मा थिए भने, त्यसैले जमीनमा हिड्ने प्रयोग गर्न राम्रो चरम अवस्थामा छ।
को एडी मा tread छैन र खुट्टाको औंलासम्म मा, घुँडा उच्च र तेजी आफ्नो काखमा हल्लाउँदै उठाएर।
कसरी लामो म सिढी मा एक दिन हिँड्नुपर्छ
मौसम बाहिर पैदल लागि अनुकूल छ भने, तपाईं यसलाई मा हिँड्नुहोस् प्रतिस्थापन गर्न सक्छ सिढी। यहाँ पनि, गति सामान्य व्यायाम देखि अलि फरक हुनेछ।
चरणहरू भन्दा stepping छैन,4span एक लिफ्ट सुरु गर्नुहोस्। तिनीहरूलाई पारित, बन्द र otdyshites जारी। बिस्तारै, तपाईं लोड बढाउन सक्छ। आफ्नो शरीर प्रयोग हुन्छ जब तपाईं चरण भन्दा चरण सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। चढाई जब म डन्डीको बार मा धान्न सक्दैन।
हिड्ने बेला के मुटुको दर हुनुपर्छ
अनुगमन मुटुको दर र साँस - को पैदल अभिन्न भाग हो। श्वास: यदि त्यहाँ सास को shortness छ, रोक्न र साँस पुनर्स्थापना आराम गर्न निश्चित हुन। मुटुको दर: यो सूत्र संग मूल्य भन्दा बढी हुँदैन:
220 - आफ्नो उमेर - 50।
उपयोगी र हानिकारक छैन हुन हिड्ने, यो हल्कासित अधिकतम स्तर पुग्न सर्वश्रेष्ठ छ।
जूता कस्तो छनौट गर्न
कति कदमहरू तपाईँ वजन एक दिन चाहिन्छ, हामी पाएका छन् र अब जूता ती दयालु यो उद्देश्य लागि चयन गर्न राम्रो छ सामना गर्न हुनुपर्छ।
छैन को विकल्प सिफारिसहरू पनि धेरै, तर तिनीहरूलाई बेवास्ता छैन। 3-4 मी को अतिरिक्त मा एक गति मा हिड्ने गर्दा / असहज जूता मा घन्टा blisters RUB वा पनि खुट्टा बिगार्न।
यो तकिये तलवों संग नरम जूता हिड्ने लागि सबै भन्दा राम्रो अनुकूल छ। यस मामला मा, धेरै राम्रो केन्द्रिय भाग मोड गर्नुपर्छ। जूता को खुट्टा क्रल हुँदैन र जूता मा धैर्य, सही आकार हुनुपर्छ।
सुरु गरेपछि दुई महिना तपाईं आफ्नो शरीर मा शक्ति महसुस हुनेछ, र व्यायाम पछि निचोडा कागति जस्तै महसुस छैन, र ताजा र ऊर्जा भरिएको। त्यसपछि, सौहार्द र एकता महसुस, तपाईंले आफ्नो सबै प्रयासमा व्यर्थमा थिएनन् कि, एक सामान्य जीवन मात्र एक स्वस्थ शरीर मा सम्भव छ बाँच्न किनभने महसुस हुनेछ। सफल पैदल!
Charcot (शवर): सङ्केत गर्छ र contraindications
पेट बोसो महिला वा पुरुष कसरी देशबाट निकाल्नु गर्न?
पेंच कम्प्रेसर: सञ्चालन को सिद्धान्त, मरम्मत
को जनवरी को मूल्य
आफ्नो हातमा धातु Galvanizing: मुख्य तरिका
उहाँले, नीलो आँखा लागि विवाह मेकअप के हो?
महिला लागि टाटु: सही छनौट
आलु, प्याज र अन्य तरकारी को क्रीम सूप
अभिनेत्री जुलिया Galkina: जीवनी, परिवार र फिलिम क्यारियर
कसरी भान्सा लागि हुड चयन गर्न - विशेषज्ञ प्रोम्प्ट गर्नेछौं
तिममेन मा माछा पकडने: नदी, झील, माछा स्थानहरु